Doorashooyinka Soomaaliya oo dib u dhacay ilaa iyo bilowga 2017 - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDoorashooyinka Soomaaliya oo dib u dhacay ilaa iyo bilowga 2017
September 25, 2016 Abdi Omar Bile Somalia 0
Odayaasha beelaha ayaa soo xuli doona baarlamaanka iyadoo xildhibaanada lasoo xulayna ay dooran doonaan madaxweynaha.
Garoowe-(Puntland Mirror) Doorashada baarlamaanka Soomaaliya iyo mida madaxweynaha ayaa dib u dhacaysa ilaa iyo bisha Febaraayo ee sanadka soo socda 2017-ka, sida ay sheegeen ilo-wareedyo.
Xildhibaan katirsan baarlamaanka Soomaaliya oo diiday in uu magaciisa sheego ayaa wakaalada wararka Reuters u sheegay in doorashada baarlamaanka ay dib u dhacday muddo labo bilood ah sababtoo ah muran ka jira sida loo soo xulayo xubnaha.
“Doorasho ma socoto,” xildhibaanka oo codsaday in aan magaciisa la sheegin ayaa sidaa Reuters u sheegay.
“Waxaa jira muran ka dhex-jira beelaha oo ku saabsan soo xulida xildhibaanada tartamaya iyo odayaasha,” ayuu ku daray xildhibaanka.
Saraakiisha dowlada federaalka Soomaaliya ayaan si dhaqso ah uga jawaabin arrintaas la xiriirta dib u dhaca doorashada.
Doorashooyinka Soomaaliya ayaa qorshuhu ahaa in ay dhacaan bishii lasoo dhaafay, balse dib ayay u dhaceen si loogu diyaar-garoobo wakhti badan.
Baarlamaanka ayaa waxaa soo xulaya odayaasha beelaha iyadoo xildhibaanada lasoo xulayna ay dooran doonaan madaxweyne.
Madaxweynaha hadda xilka haya Xasan Shiikh Maxamuud iyo Raysulwasaaraha hadda jooga Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa u taagan doorasho.
July 5, 2016 Madaxweynaha Soomaaliya oo cambaareeyay weerarada argagixiso oo ka dhacay Sucuudiga
August 6, 2016 Culimada Puntland oo kasoo horjeestay fanaaniin bandhig faneed ku qabanaya Garoowe
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland President has vowed that Somaliland “will pay a heavy price” for its aggressive attack on Puntland territory. Speaking at press conference held at presidential place Wednesday, Abdiweli Mohamed Ali said: “Puntland is [...]